आज जेठ ३ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस्…
June 17, 2020 913
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ)- नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरू बढ्नेछन्। रचनात्मक कामले फाइदा दिलाउनेछ। पहिलेको सफ’लताले थप हौसला जगाउनेछ। रमाइ’लो जमघ’टका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द लिने अवसर जुट्नेछ। बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ। मन’पर्ने वस्तु, उपहार प्राप्त हुनेछ। सुन्दर पहि’रनले व्यक्तित्वमा आकर्षण ल्याउनेछ।
वृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो)- समस्या पर्दा सहयोग गर्नेहरू कमै भेटिनेछन्। परिश्रमका तुलनामा प्रतिफल कम मात्र प्राप्त हुनेछ। खर्च, विवाद बढ्ने समय रहेकाले महत्त्वाकांक्षी योजनामा अघि नबढ्नुहोला। पाउमा चोटपटकको योग देखि’एकाले सजग रहनुहोला। खर्चको जोहो गर्न आफ्नाबाटै टाढिनुपर्ने परिस्थिति आ’उन सक्छ। आर्थिक प्रलोभन देखाउनेहरूबाट सज’ग रहनुहोला।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह)- आफ्नो मेहनतबाट अरूले फाइदा उठाउने कोसिस गर्नेछन्। चिताएका काममा अलि बाधा हुनसक्छ। समय लागे पनि मिहिनेत गर्दा काम ब’नाउन सकिनेछ। विगतका कर्मको उचि’त प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। तर समयमा सजग नहुँदा आफ्नो लाभांशबाट अरूले फाइदा उठा’उने चेष्टा गर्नेछन्। आम्दानी मनग्य भए पनि आकस्मिक खर्चले धन संग्रहमा बाधा पुग्नेछ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो)- सामा’जिक कार्यले हौसला प्रदान गर्नेछ। प्रतिष्ठित काम गरेर धेरैको मन लोभ्याउन सकिनेछ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। पुरुषार्थी कामले समा’जमा स्था’पित बनाउनेछ। चुनौती पन्छाएर पनि नयाँ का’ममा जग बसाउने मौका छ। परिश्रम परे पनि समय फलदायी रहनेछ। भूमि तथा पैत्रिक सम्पत्ति’बाट लाभ मिल्नेछ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे)- शारीरिक कमजोरीले चिन्ता बढाउन सक्छ। अरूका लागि समय, धन र बुद्धि खर्चनुपर्ला। बाध्यताले अलमल्या’उन सक्छ। तापनि, लगनशीलता’ले उपलब्धिको स्रोत प्राप्त हुनेछ। काम पूरा नभए पनि दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा केही लाभ हुन सक्छ। सामुदायिक जिम्मे’वारी वहन गर्ने समय छ। चिताएको मूल्य प्राप्त नभए पनि पछिलाई फाइदा हुने काम हातला’गी हुन सक्छ।
कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो)- खर्च र चुनौतीको समय रहेको हुँदा अलि सजग रहनुपर्ला। कामको चाप बढ्नेछ भने समयमै गम्भीर नबन्दा नचि’ताएको समस्या देखिन सक्छ। आ’फ्नै कमजोरीले इष्टमित्र टाढिन सक्छन्। हुलमुलमा जिउधन जोगाउन सजग रहनुहोला। अवसरको खोजी’मा दौडधुप गर्नुपर्ला। दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा पनि आँटेको काम नबन्न सक्छ। पछिका लागि के’ही वस्तु त्याग्नुपर्ला।
तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते)- परि’स्थिति अनुकूल रहनेछ भने लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। छोटो समयमा फाइदा उठाउन सकिनेछ। अध्ययन’मा प्रगति हुनेछ भने लेखनकलामा निखारता आउनेछ। उपहार र खानपानले दिन आनन्द’मय रहनेछ। परिवारजनको साथले उत्साह जगा’उनेछ। अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउने मौका छ। सेवामूलक कामले नाम र प्रतिष्ठा दिलाउ’नेछ।
वृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु)- भौतिक साधन जुट्नाले दिगो काम प्रारम्भ हुनेछ। साहसी काम गरेर प्रशस्त ला’भ उठाउन सकिनेछ। नयाँ योजनातर्फ अग्रसर भइनेछ। नयाँ काम प्रारम्भ हुनेछ भने मिहिनेतले आय’स्रोत सबल बनाउन सकिने’छ। व्यापारमा फाइदा हुनेछ। विग’तका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। प्रतिस्पर्धाको दौडमा अग्रस्थान हासिल हुनेछ। दिगो काम हात’लागी हुने समय छ।
धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे)- अवस’रले पछ्याए पनि फाइदा उठाउन चुनौतीहरूसँग जुध्नुपर्नेछ। प्रतीक्षा गरिएको नतिजा कमजोर देखिनेछ। सहयोगी’हरूले साथ दिन छाड्नेछन् र प्रगतिमा ईर्ष्या गर्नेहरूले दु:ख दिनेछन्। समय’को गतिलाई पछ्याउन नसक्दा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ला। स्वास्थ्यका लागि खा’नपान र व्यायाममा ध्यान दिनुहोला। लगनशीलताले मात्र उपलब्धि दिला’उन सक्छ।
मकर(भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि)- आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्याउन सक्छन्। कामको अवसर प्राप्त भए पनि तत्काल प्रतिफल हातलागी नहुन सक्छ। पहिले’का सम्झौता तोड्नु’पर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। अरू’को भरले मात्र काम पूरा नहुन सक्छ। मान्यजनको सहयोगले तत्काललाई अन्यो’ल टर्न सक्छ। रोकिएका काम भने दोहोर्याउनुपर्ला। अवसरलाई पछ्याउन नस’क्दा व्यवहारमा पछि परिनेछ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द)- नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। चिताएको काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नेछ। दाजुभाइमा आत्मीयता बढ्नेछ भने प्रेम र मित्रताको बन्धनसमेत कसिनेछ। लगानी गर्दा व्यवसायमा मनग्गे धन’लाभ हुनेछ। आलस्य त्यागेर मिहिनेत गर्दा फाइदा उठाउन सकिनेछ। पहिलेको उपलब्धिले पनि उत्सा’ह जगाउनेछ। प्रतिस्पर्धीहरूले समेत सहयोगका हात फैलाउ’नेछन्।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि)- ‘आत्मविश्वासको कमीले काममा पछि परि’नेछ। शुभचिन्तकहरूको भावनालाई बेवास्ता गर्दा दु:ख पाइनेछ। खर्च हुने डरले सताउन सक्छ। वादविवादबाट टाढा रहनुहोला। अर्थ अभावले पनि का’ममा बाधा पुग्नेछ। आफ्ना सूचनासम्बन्धी गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगि’एर काम लिनुहोला, आज’को मिहिनेतले भविष्यमा नाम र प्रतिष्ठा दिलाउनेछ।
तपाईंको दिन सुभ रहोस् ।।
Prevआज थप ३५० संक्रमित भेटिए, कुन जिल्लामा कति थपिए ? हेर्नुहोस्…
Nextसर्वोच्चले सरकारलाई भन्यो : विदेशमा अलपत्र कामदार ल्याउँदा शुल्क नलिनु
काठमाडौंमा बालेन शाहको सुरूवाति अग्रता, ७५ भोट गन्दा यति पाए बालेनले
आज असार २४ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस्…
हेर्नुहोस्.. पाँडेले बहुʼला भनेपछि रोʼए धुर्मुस ! हलभित्र हजारौ खेलाडीको आँʼखाभरि आँʼसु…..(भिʼडियो सहित)
नेपालका सफल नायक पल शाह भाग्यले बाँचे.. जोशी भन्छन् त्यस्तै योजना बन्दै थियो